Tari-dalana Toriteny Alahady 04 Jona 2017 (Andro PENTEKOSTA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 04 Jona 2017 (Andro PENTEKOSTA)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny perikopa izay ho toriana amin’ny Alahady Pentekosta izao.
Pentekosta: ny nilatsahan’ny Fanahy Masina (izay lazaina hoe: Fanahin’ny fampiraisana) sy ny fahaterahan’ny Fiangonana Kristiana. Izany maha izy azy ny Fiangonana Kristiana izany indrindra àry no ambaran’ity texte izay anjarantsika eto ity. Tahaka izao manaraka izao no fanazavana azy:
Tao amin’ny TT dia sary nentina nilazana ny Israely ny hoe “voalobok’i Jehovah” na “voaloboka nambolena sy nokarakarain’i Jehovah” (oh. Hos 10:1; Isa 5:1; Jer 2:21; Ezek 17:6–8). Tsy ny Israely amin’ny maha firenena azy ihany anefa izany fa izy amin’ny maha Fiangonana azy indrindra koa. Raha mampiasa ny fehezanteny hoe “Izaho no tena voaloboka ary ny Raiko no mpamboatra” (and. 1) sy ny hoe “Izaho no tena voaloboka, ianareo no sampana” (and. 5) àry Jesosy eto dia izany sary efa nampiasan’ny Testamenta Taloha azy izany no foto-kevitra niaingany kanefa koa efa ambarany ao ambadik’izany sahady ny fisoloan’ny Tenany sy ny mpino Kristiana izay miombona Aminy ilay Israely taloha na ilay Fiangonana tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha. “Jesosy no tena voaloboka…” = “Izy sy ny mpino miombona ao Aminy no Israely vaovao” na “Izy sy mpino miombona ao Aminy no Fiangonana vaovao”. Ao amin’ny Jao. 2:19–21 dia efa nolazainy fa Izy no misolo ilay Tempoly taloha, izany hoe, Izy no Tempoly vaovao (sady sorona) izay mampihaona na mampihavana ny olona amin’Andriamanitra sy ny olona. Ny naha Fiangonana ny Israley tao amin’ny Testamenta Taloha dia ny fisian’ny Tempoly teo anivony, izay nanaovany fanompoam-pivavahana (sorona) na niarahany nonina tamin’ Andriamanitra teo anivony. Raha nanambara ny tenany ho “ny Tempoly vaovao” (2:19–21) sy “Israely vaovao” (15:1) àry Jesosy eto dia izany sarin’ny Fiangonana Kristiana indrindra no tiany ambara amin’izany: Izaho no tena voaloboka, ianareo no sampana = Ny fiombonan’ny mino ao amin’i Kristy = Ny Fiangonana Kristiana.
Ny hoe “Izaho no tena voaloboka” = “Izaho no tsy sandoka fa tena Izy”. Miteny an’izany Jesosy satria betsaka ireo Fiangonana sandoka na ireo izay milaza azy ho Fiangonana kanefa sandoka tamin’izany fotoana izany: ireo izay milaza hoe “indro ety na indro ery Kristy” kanefa ny Anti-Kristy no lazainy.
Ny Epistily izay anjarantsika eto (Efes 2:19–22) dia mamaritra izany Fiangonana Kristiana izany amin’ny alalan’ny sary hafa: Trano/Tempoly izay manana ny Apostoly sy ny Mpaminany ho fototra, manana an’i Kristy Jesosy ho fehizoron’izany fototra izany, ny mpino Kristiana rehetra izay vita fihavanana tamin’Andriamanitra ho toy ny vato velona izay mandrafitra izany Trano/Tempoly izany, ary izany trano/Tempoly izany dia fonenan’Andriamanitra Ray amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny fitiavana/fihavanana (Efes. 2:14–18) no toy ny rihitra izay mampiray izany rafitra rehetra izany. Tahaka izany koa eto amin’ity texte ity: Ny fitiavana no mampiray ny mino amin’i Jesosy sady mampiray ny mino ao Aminy koa (and. 9–11). Jesosy anefa no tena loharanon’izany fitiavana izany (jereo, “isika tia satria Izy efa tia antsika taloha”, 1 Jao 4:19). Araka ny ny Gal. 5:22 snm koa anefa dia lazain’i Paoly Apostoly fa vokatry ny Fanahy Masina izany fitiavana izany: izany no maha Fanahin’ny fampiraisana azy.
Raha fintinina: Ny Fiangonana Kristiana dia fiombonan’ny mino ao amin’i Kristy Jesosy izay fonenan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina (ampit. Tempolin’ny Fanahy). Ny fitoeran’ny Fiangonana Kristiana amin’izany maha izy azy izany no mampamokatra ny asany rehetra araka izay nanirahan’Andriamanitra azy eto amin’izao tontolo izao (ampitahao Mat. 28:18–20; Mar. 16:15–18). AMENA !
Ratsikiniony Liva Solofo
Misaotra tompoko , nefa tena kely loatra sy fohy loatra ny fahafantaran’saiko ka tsy hitako ny fifandraisan’ity texte ity sy ny pentekosta, asa raha misy fanampimpanazavana azo atao, misaotra
Sao dia ilay lalan-kevitra « Pentekosta @ maha-« anniversaire »-n’ny Fiangonana azy » no tsara arahina.